संकट परेका बेला भारतले २६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधीमा रोक लगाएपछि नेपालले आफै बनायो, अब आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल ! – Dainik Sangalo
July 21, 2020 126
Prevराजधानी छिर्ने मुख्य नाकामा २०० भन्दा बढी पहिरो खस्यो, अब पृथ्वी राजमार्ग खोल्न नै दुई दिन लाग्ने ! (तस्विर र भिडियोसहित)
Nextधनगढीका तीन ठाउँमा राखेका बम सेनाको टोलीद्वारा निस्क्रिय
निषेधज्ञामा साझा बस चल्ने
भोलि मिति २०७७ साल माघ ३० गते शुक्रबार। भोलिको राशीफल यस प्रकार रहेको छ।
नेपालकै जेष्ठ नागरिकको १ सय १४ वर्षको उमेरमा निधन